Baarlamaanka Hirshabeelle oo ansixiyay Golaha Wasiirada(Dhagayso) – STAR FM SOMALIA
Kulan maanta ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxaa lagu ansixiyay golaha wasiirada dowlada Hirshabeelle.
Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Shiikh Cismaan Maxamed Barre ayaa ku dhowaaqay in 71 xildhibaan ay ansixiyeen golaha wasiirada Hirshabeelle.
85 xildhibaan ayaa soo xaadirtey kulankan iyadoo 71 ay ansixiyeen golaha wasiirada cusub.
Golaha wasiirada oo ka kooban 52 ruux oo isugu jira wasiiro,wasiir ku xigeeno iyo wasiiru dowlayaal ayaa 35 ka mid ah waxa ay yihin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle.
Qaar ka mid ah golaha wasiirada oo kulanka ka dib saxaafada la hadlay ayaa waxa ay ballanqaadeen inay si hufan howlahooda u qaban doonaan ayna ugu horeeyaan abaaraha ka jira dowlad goboleedka.
Halkan ka dhagayso Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo ku dhowaaqaya ansixinta golaha wasiirada